JECHOOTA HAYYOOTA OROMOO IRRAA…. -
JECHOOTA HAYYOOTA OROMOO IRRAA….
bilisummaa October 11, 2014	2 Comments
Maddi:- Manguddoo oromoo irraa.
Kan yaadannoo isaarraa nuuf laate:- @Murataa teysoo
Qindeessee dhiheessaan:- ‪#‎Saphaloo_Kadiir‬.
Yaada. Qeebaa ykn komii yoo qabaattan teessoo armaan gadii kanaan nu qunnamaa.
Previous Waahee keenya
Next Yaadannoo waamicha FDG Kutaa Skandnavia
Galatoomio kana caalaa cimi
waan garidha itti fufi